१२ माघ २०७६, आईतवार १६:५२
बङ्गलादेश । समयमै मानसिक रोगको उपचार भएमा सार्थक जीवन बिताउन सक्ने मनोविद्हरुको जनाएका छन् । बङ्गलादेशको राजशाहीमा भएको ‘विकासात्मक अपाङ्गता’ सम्बन्धी सातौँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा मनोविद्ले सो कुरा औल्याउँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धीको विषयलाई बेवास्ता नगरी प्रभावकारीरूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मनोचिकित्सक, मनोविद्, विज्ञ तथा मनोविज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति र अध्ययनकर्ताले हरेक देशमा […]
तनावमुक्त जीवन कसरी जीउने ?
२७ पुष २०७६, आईतवार १६:००
एजेन्सी । आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीका कारण विभिन्न प्रकारका रोगहरुले सजिल्यै मानिसको शरीरमा प्रवेश पाएको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल बढ्ने जस्ता रोगहरु लाग्नु सामान्य नै जस्तो भइसक्यो । जति मानिस पैसामुखी, सफलतामुखी बन्न थाल्छन् तब उनीहरुको दैनिक जीवनयापन तनावपूर्ण हुन थाल्छ । जसले गर्दा पनि अनेक प्रकारका रोगहरुले सताउँन थाल्छ । तनावका पनि धेरै […]
कपालमा चाँया पर्ने समस्याको समाधानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने प्रयोग गर्नुस ‘नुन’
२७ पुष २०७६, आईतवार १५:२४
एजेन्सी । कपालमा चाँया पर्ने समस्याबाट धेरैजना पीडित हुने गर्छन् । अझ जाडो मौसममा चाँया पर्नु त सामान्य नै हुन्छ । टाउकोमा चाँया परेपछि अनुहार, घाँटी र कपडामा समेत देखिन थाल्छ । जसले गर्दा मानिसहरु निकै समस्यामा पर्ने गर्छन् । त्यसैले, चाँयाबाट छुटकारा पाउनको लागि मानिसहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन् । तर उपचार गरेको केही […]
स्वास्थ्य बीमा गरेकामध्ये आधाले पनि गरेनन् नवीकरण
२७ पुष २०७६, आईतवार १५:१६
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता भए पनि नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या कम देखिएको छ । चितवनमा बीमा गरेका ४९ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छैनन् । जिल्लामा करिब साढे चार लाखले बीमा गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तमध्ये दुई लाख ३६ हजार २२३ जनाले मात्र नवीकरण गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड चितवनका दर्ता अधिकारी निर्मला भट्टराईले […]
ढोकाबाटै राउण्ड हुन्छन् चिकित्सक, अस्पतालको सेवादेखि बिरामी असन्तुष्ट
२४ पुष २०७६, बिहीबार १६:५९
बाँके । भेरी अस्पतालमा सेवा लिन आउने अधिकांश बिरामी अस्पतालको सेवासुविधा, चिकित्सकको व्यवहार र सरसफाइप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र सङ्घीय अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनेभन्दा असन्तुष्ट हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको जनाइएको छ । दैनिक एक हजारको हाराहारीमा बिरामी सेवा लिन अस्पताल आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । सेवा लिन भेटिएका अधिकांश बिरामी […]
के हो खिचडी ? के छन् यसका फाइदाहरु र कसरी पकाउने खिचडी ?
प्राचीन धर्मशास्त्र होस् या त अहिलेको चिकित्सा विज्ञान । खिचडीको महत्व परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । जसरी बौद्ध सम्प्रदायमा खिरको महत्व रहेको छ । त्यसैगरी हिन्दूहरुको घरमा विशेषगरी पौष महिनामा नियमित खिचडी खाने चलन थियो । पछि यसलाई कम गरेर पौषको आमावश्यामा खिचडी आमावश्या मनाउने चलन सुरु भयो । बिस्तारै बिस्तारै यसको धार्मिक महत्वलाई अहिले […]
किन लाग्छ मान्छेको बोसो ?
२३ पुष २०७६, बुधबार १६:१७
केही मान्छे कमजोर भयो वा दुब्लो पातलो भयो भने हामी सामान्य रुपले भन्ने गर्छौं– खानामा क्यालोरी पुगेन जस्तो छ । यसरी, सामान्य भाषामा भन्दा हामीले क्यालोरी भनेको शक्ति हो भन्ने बुझ्छौं ? तर के क्यालोरी भनेको शक्ति नै हो त ? हो, एक किसिमले क्यालोरी भनेको शक्ति नै हो । तर ठोस रुपमा भन्दा क्यालोरी […]
एकाएक किन उत्पन्न हुन्छ आत्महत्या गर्ने सोच ?
२१ पुष २०७६, सोमबार १५:३०
एजेन्सी । बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले आत्महत्या नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा अनुसन्धान गरेको छ । म्यालिकुलर साइक्याट्रिक जर्नलले प्रकाशित गरेको उक्त अनुसन्धानमा आत्महत्याको सोच र व्यवहारको विषयमा ब्रेन इम्याजिनले अध्ययन गरेको थियो । जसले एक दशकसम्म यसै विषयमा केन्द्रित भएर गहन अध्ययन गरेको बताएको छ । उक्त अनुसन्धानले मस्तिष्कभित्र नै भएको प्रमुख प्रमुख नेटवर्कको बारेमा पत्ता […]
यौन दुर्बलता स् यौन जीवनका लागि खतरनाक, पहिचान गरेर समयमै उपचार गर्न सके फाइदा
२१ पुष २०७६, सोमबार १५:१९
यौन दुर्बलता भनेको त्यस्तो समस्या हो, जसमा जोडीले यौन गतिविधिबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन् । यौन क्रियाकलापमा सक्रिय करिब ४३ प्रतिशत महिला र ३१ प्रतिशत पुरुषमा कुनै न किसिमको यौन दुर्बलताहरु हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । के हो यौन दुर्बलता ? यौन दुर्बलता भनेको त्यस्तो समस्या हो, जसमा यौन क्रियाकलापका चरणहरुमा कुनै पनि व्यक्ति वा […]